တရုတ်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | DOWODA
ထုတ်ကုန်အမည် လူမီနီယမ်အလွိုင်းအီလက်ထရောနစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား ဒီဂျစ်တယ်အမျိုးအစား
လျှပ်စစ်အမှားများ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်လည်းပြeshနာဖြေရှင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု၏အသုံးများသောပြtroublနာဖြေရှင်းနည်းနည်းလမ်းများအားအထက်ပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းလမ်းများတွင်ပြည့်စုံစွာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ယခုအခါများစွာသောလျှပ်စစ်အမှားများကိုဖော်ပြထားသည်။
၁။ Power supply power supply သည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ်နှင့် CNC လမ်းလျှောက်စက်တစ်ခုလုံး၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပျက်ကွက်ပါကသို့မဟုတ်အမှားသေးသေးလေးဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ဒေတာများကိုဆုံးရှုံးသွားစေပြီးရပ်တန့်စေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင်၎င်းသည်စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်။
အနောက်နိုင်ငံများတွင်စွမ်းအင်လုံလောက်စွာရှိပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောကြောင့်သူတို့၏စွမ်းအားစနစ်ဒီဇိုင်းကိုစဉ်းစားစဉ်းစားသည်။ ဤအချက်သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိကြီးမားသောအတက်အကျများနှင့်မြင့်မားသောသဟဇာတများရှိသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ရေးကွန်ယက်များအတွက်အနည်းငယ်မလုံလောက်ပါ။ အချက်များအနေဖြင့်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြfailနာများရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ CNC ၏အဓိကလမ်းလျှောက်စက်၏ power supply system ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားရမည်။
equipment အခြားပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် တွဲဖက်၍ အသုံးမပြုဘဲသီးခြားလွတ်လပ်စွာဖြန့်ဖြူးသည့်သေတ္တာကိုပေးပါ။
supply power supply အစတွင်ကောင်းမွန်သောမြေပြင်ရှိသည်။
power စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောthreeရိယာများကိုအဆင့်သုံး AC ဗို့အားတည်ငြိမ်စေသောကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသင့်သည်။
the ကက်ဘိနက်အတွင်းရှိလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် AC နှင့် DC ဝါယာကြိုးများတပ်ဆင်ခြင်းကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သီးခြားခွဲထားသင့်သည်။
the CNC ၏ဗဟိုလမ်းလျှောက်စက်ထဲသို့သုံးဆင့်ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည်သုံးဆင့်ပါသောငါးဝါယာကြိုးစနစ်ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
2. ) CNC လမ်းလျှောက်မှုစနစ်၏အနေအထားကွင်းဆက်ပျက်နေသည်
loop နေရာချကွင်းဆက်နှိုးစက်။ ဒါဟာအနေအထားတိုင်းတာခြင်းကွင်းဆက်ပွင့်လင်းဖြစ်နိုင်သည်; တိုင်းတာသောဒြပ်စင်သည်ပျက်စီးသွားသည်။ အနေအထားထိန်းချုပ်မှုအားဖြင့်ထူထောင်သည့် interface ကို signal ကိုမတည်ရှိပါဘူး။
②ကိုသြဒီနိတ်ဝင်ရိုး command ကိုမပါဘဲရွေ့လျား။ ဒါဟာပျံ့လွန်းသည်ဖြစ်မည်အကြောင်း, position loop (သို့) speed loop သည်အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားတယ်။ တုံ့ပြန်ချက်ဝါယာကြိုးပွင့်လင်းသည်, တိုင်းတာခြင်းဒြပ်စင် အပိုင်းအစတွေပျက်စီးသွားတယ်
3. CNC လမ်းလျှောက်စက်သြဒီနိတ်၏သုညအမှတ်ကိုရှာမတွေ့ပါ။ ဒါဟာသုည ဦး တည်ချက်ဝေးသုညအချက်အနေဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်, encoder ပျက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝါယာကြိုးပွင့်နေတယ်၊ အဆိုပါဆန်ခါသုညအမှတ်အမှတ်ပြောင်းလဲနေသည်;
မြန်နှုန်း switch သည်မအောင်မြင်ပါ
(၄) NC core စက်၏တက်ကြွသောဝိသေသလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားလာပြီးအရည်အသွေး၏အရည်အသွေးကိုလျော့ကျစေသည်။ ဒီလိုမျိုးမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်
position loop နှင့်ဆက်စပ်သော parameters များသည်အကောင်းဆုံးသောကိုက်ညီသောအခြေအနေတွင်မရှိတော့ပါ။ စက်မှုအမှားအားအခြေခံအားဖြင့်ဖယ်ရှားပြီးနောက်တွင် ထပ်မံ၍ ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သင့်သည်။
၅။ ရံဖန်ရံခါ shutdown failure ဤနေရာတွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခြေအနေနှစ်ခုရှိသည်။ - အခြေအနေတစ်ခုသည်ဆက်စပ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲတွင်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်သည်
လည်ပတ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပေါင်းစပ်မှုအောက်ရှိ shutdown failure သည်ယေဘုယျအားဖြင့် CNC ၏အဓိကစက်သည်ပါဝါပိတ်ပြီးနောက်တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ အခြားအခြေအနေတစ်ခုသည်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်သည်
ထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (ဇယားကွက်သို့မဟုတ်အရံပစ္စည်းကိရိယာများ)၊ အလွန်အကျွံအပူချိန်၊ အလွန်အကျွံစိုထိုင်းဆစသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။
စိတ်ကိုစက်ကိုသာမန်စက်ရုံအဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောအဖွင့်အနီးတွင်ပင်ထားရှိသည်။ လျှပ်စစ်ကက်ဘိနက်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်ထားနိုင်ပြီးအနီးအနားရှိထုတ်ကုန်များဖြစ်သောဖုန်မှုန့်၊ သတ္တုရိုင်းများသို့မဟုတ်ရေအခိုးအငွေ့များလည်းရှိသည်။
စောင့်ပါ ဤအချက်များကြောင့်ကျရှုံးမှုဖြစ်ရုံသာမကလမ်းလျှောက်နိုင်သည့်စက်၏စနစ်ကိုပါအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ တိုးတက်မှုကိုအာရုံစိုက်ရန်သေချာစေပါ။
စာရွက်သတ္တုကိုယ်ထည် shell ကို
မြန်မြန်ဆန်ဆန် proofing ဟက်တာ processing CNC ရှေ့ပြေးပုံစံမော်ဒယ် ...
5 ဝင်ရိုးတန်း CNC ခုံ, CNC သံမဏိထုတ်ယူခြင်း, CNC တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်ယူခြင်း, CNC လက်ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်ယူခြင်း, CNC စက်စက်စင်တာထုတ်ယူခြင်း, စက်ပစ္စည်းကိရိယာ Shell,